သာသနာလမ်း ဖြောင့်ဖြောင့်လုိုက်မယ်။ ဘုရားအလိုကျနေမယ်ဆိုတဲ့ ရွှေကျင်ဂိုဏ်းရဲ့အနှစ်အသား ပျက် ? all that glitter like Thidagu may be NOT gold… | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« အစိုးရရဲ့ အကြံပေး တယောက် “”ခင်ဗျားတို့က ကျုပ်တို့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ လ က ဖန်တီးထားတဲ့ အရှုပ်ထုပ်တွေကို အခုဖြေရှင်းဖို့ ဆွေးနွေးနေကြတယ်။ ကျုပ်တို့က နောက် ၃ လ အကြာမှာ ဘာ အရှုပ်ထုတ်တွေ လုပ်ရမလဲ ဆိုတာကို ဆွေးနွေးနေကြတယ်။”
တရုတ်နဲ့ ကုလား ဘာကွာလဲ »
သာသနာလမ်း ဖြောင့်ဖြောင့်လုိုက်မယ်။ ဘုရားအလိုကျနေမယ်ဆိုတဲ့ ရွှေကျင်ဂိုဏ်းရဲ့အနှစ်အသား ပျက် ? all that glitter like Thidagu may be NOT gold…
Shwe Kyin WAS once said to be the best in Buddhist Gangs.
Shwe Kyin must be clever that all that glitter like Thidagu may be NOT gold…
Dr. Htet MinlwinYesterday
မင်းတုန်းမင်းလက်ထက် ရွှေကျင်ဆရာတော်ကို သာသနာပိုင် မောင်းထောင်ဆရာတော်က သုဓမ္မာသို့ ဆင့်ခေါ်ရာ ရွှေကျင်ဆရာတော် ကြွတော်မမူ။ သာသနာပိုင် အမိန့်နှင့် ကြွစေရန် မဟာဒါန်ဝန်က အတင်းစီမံတော်မူခြင်းကို ရှင်ဘုရင် သိလျှင် ရွှေကျင်ဆရာတော်ကို သုဓမ္မာမှ သီးခြား ရှိပါစေ အမိန့်ပေးသဖြင့် ဂဏဝိမုတ် သီးခြား ရွှေကျင်ဂိုဏ်းဟူ၍ ပေါ်ပါတယ်။ ရွှေကျင်ဆရာတော့် အဆုံးအမအောက်မှ ရှိတဲ့ ရဟန်းသာမဏေတွေလဲ သုဓမ္မာက ကင်းလွတ်ခွင့်ရပါတယ်။ တနည်းပြောရရင် ရွှေကျင်ဂိုဏ်းဟာ ရပ်ရေး၊ ရွာမှု၊ organized monastic institutions တွေမှာ ဝင်မပါဘဲ ဝိနည်းတင်းတင်းလေးစားပြီး “အရညဂတာနံဝါ” မင်းအစိုးရအာဏာစက်အသင်းအပင်းမှ ဝေးရာမှာ နေတဲ့ သံဃာဂိုဏ်းဖြစ်ပါတယ်။ သမိုင်းတလျှောက် ကြည့်ရင် ကိုလိုနီခေတ်၊ လွတ်လပ်ရေးခေတ်တွေမှာ ရွှေကျင်ဂိုဏ်းသံဃာများ မင်းရေး စိုးခွင်၊ လူမှုရေး မရောနှောဘဲ သီးသီးသန့်သန့်နေပါတယ်။ ဒါဟာ သာသနာလမ်း ဖြောင့်ဖြောင့်လုိုက်မယ်။ ဘုရားအလိုကျနေမယ်ဆိုတဲ့ ရွှေကျင်ဂိုဏ်းရဲ့အနှစ်အသားပါပဲ။ (secular trend နဲ့လဲ နီးတယ်။) မင်းတုန်းမင်းကောင်းမှုနဲ့ ရလာတဲ့ ဒီအခွင့်အရေးဟာ ဗိုလ်နေဝင်းခေတ် ဂိုဏ်းပေါင်းစုံ သံဃာတွေကို မဟန နဲ့ ထိန်းဖုို့ လုပ်တဲ့အခါမှ ပျက်ပါတယ်။ ပြောလိုတာကတော့ လူမှုရေး အသားပေး၊ ရောယိမ်းလိုက် ဘသားယိမ်းလုိုက်၊ ဘယ်သူကိုတော့ သမတလုပ်စေချင်တယ် ဘာညာလုပ်နေတဲ့ဘုန်းကြီးမျိုး သူ့ဟာသူ ပြောတာ လုပ်တာ နေတာ ထုိုင်တာ ဘာမှ မှတ်ချက်မပေးလိုပါ။ သို့သော် သမုိုင်းတလျှောက် လူမှုရေး၊ ရပ်ရေး ရွာမှု၊ နိုင်ငံရေးနဲ့ ကင်းအောင်နေလာတဲ့ ရွှေကျင်ဂိုဏ်း သာသနာပိုင်၊ တွဲဖက်သာသနာပိုင် ရာထူးနဲ့တော့ ထိုက်တန်တယ် မထင်ဘူးဆိုတဲ့အချက်ကို ထင်ရှားစေလိုရင်း ဖြစ်ပါတယ်။ (အဆက်ဆက် သာသနာပိုင်တွေ တွဲဖက်သာသနာပိုင်တွေရဲ့အာစရိယဝံသ၊ အာစရိယဝါဒကိုလဲ ပြန်ကြည့်ကြပါ။)
Htet MinlwinYesterday at 7:54pm · Edited · ရွှေကျင်ဂိုဏ်းသာသနာမှာ ဒုတိယသာသနာပုိုင်ဆိုရင် လယ်တီဆရာတော်ကြီးနဲ့ ခေတ်ပြိုင် မဟာဝိသုဒ္ဓါရုံဆရာတော်ကြီးကို ပြေးမြင်ပါတယ်။ ဥပဥက္ကဋ္ဌလို့ ခေါ်တဲ့ သာသနာပိုင်အောက်တဆင့်က ဆရာတော်တွေကို တွဲဖက်သာသနာပုိုင်လို့ ခေါ်ရိုးထုံးဖြစ်ပါတယ်။ ခုတော့ ဘီဘီစီလို ဌာနကြီးကတောင် အသစ်မြှောက်လိုက်တဲ့ ဆရာတော်သုံးပါးကို ဒုတိယသာသနာပိုင်လို့မှားယွင်းစွာ သုံးနေတာ ဆုံးရှုံးမှုတရပ်ပါပဲ။
ရွှေကျင်ဂိုဏ်း၏ တွဲဖက်သာသနာပိုင်အဖြစ် သီတဂူဆရာတော်ကြီးအား ခန့်အပ်
သီတဂူဆရာတော် ဒေါက်တာအရှင်ဉာဏိဿရအား ဗုဒ္ဓသာသနာတော်လုံးဆိုင်ရာ ရွှေ ကျင်နိကာယသံဃာ့ဂိုဏ်း၏ တွဲ ဖက်သာသနာပိုင်အဖြစ် ခန့်အပ် လိုက်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဒုတိယအင် အားအကြီးဆုံးသံဃာ့ဂိုဏ်းဖြစ် သည့် ရွှေကျင်ဂိုဏ်းအနေဖြင့် လစ်လပ်နေသော တွဲဖက်သာသနာပိုင်သုံးနေရာကို အစားထိုးရွေးချယ်တင်မြှောက်ခဲ့ရာ သီတဂူဆရာတော်ကြီးအား ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခဲ့ ခြင်းဖြစ်သည်။
ဇန်န၀ါရီ ၂၇ မှ ၂၉ ရက် အထိ သုံးရက်ကြာကျင်းပခဲ့သော ရွှေကျင်ဂိုဏ်းလုံးကျွတ် အစည်း အဝေးကြီး၏ နောက်ဆုံးနေ့တွင် ခန့်အပ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ကာ ရွှေကျင်သာသနာပိုင် ၀ါဆိုဆရာတော် ကြီးမှဘွဲ့ပုံတော်လက်မှတ်များချီးမြှင့်ခဲ့သည်။
‘‘အခွင့်အရေးဆိုတာ အလုပ်ပဲ။ ရာထူးမဟုတ်ဘူး။ အခုလို ဘုန်းကြီးကို တွဲဖက်သာသနာပိုင် ခန့်လိုက်တာဟာ အလုပ်လုပ်ဖို့ တာဝန်ပေးတယ်လို့ပဲ ခံယူပါ တယ်။ သက်တော် (၈၀) ကျော် ဆရာတော်ကြီးတွေ အများကြီးရှိ တဲ့ အထဲက အခုလို အသက် (၈၀) တောင် မပြည့်သေးတဲ့ ဘုန်းကြီးကို ဒီရာထူးအပ်လိုက်လို့ အ နေကျုံ့ပြီး ရှက်သလိုတောင်ဖြစ် ရပါတယ်’’ဟု သီတဂူဆရာတော် ကြီးက မိန့်ကြားသည်။
တွဲဖက်သာသနာပိုင် သုံးပါး ခန့်အပ်ခဲ့ရာတွင် သက်တော် (၈၆)နှစ်ရှိ ဘဒ္ဒန္တ ၀ိဇ္ဇောတ၊ သက်တော်(၈၀)ရှိဘဒ္ဒန္တမာနိတသိရီဘိဝံသ၊ သက်တော်(၇၉)နှစ်ရှိ သီတဂူဆရာတော် ဒေါက်တာဘဒ္ဒန္တ ဉာဏိဿရတို့အား သာသနာပိုင်ဝါဆို ဆရာတော်ကြီးအမိန့်ဖြင့် ခန့်အပ် ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဇန်န၀ါရီ ၂၇ မှ ၂၉ ရက်အ ထိ သုံးရက်ကြာပြုလုပ်ခဲ့သည့် အ ဆိုပါအစည်းအဝေးသို့ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပမှ ရွှေကျင်ဂိုဏ်းဝင် ဆရာတော်အပါး ၁,၀၀၀ ခန့်တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်လုပ်ငန်းစဉ်များတင်ပြခြင်း၊ ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခြင်း၊ သာသနာတော်သန့်ရှင်းရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ ဆွေးနွေးခြင်း၊ လစ်လပ်လျက်ရှိ သော ရာထူးအသီးသီးများတွင် အစားထိုးခန့်အပ်ခြင်း၊ စာတမ်းများတင်သွင်းခြင်း အစရှိသည် များကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါအစည်းအဝေးကြီးမှ ဆုံးဖြတ်ချက် ငါးရပ်၊ ခန့်အပ်ခြင်း ငါးရပ်၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း ၁၃ ရပ်တို့ကို ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သတင်း ထုတ်ပြန်သည်။
ရွှေကျင်ဂိုဏ်းသာသနာမှာ ဒုတိယသာသနာပုိုင်ဆိုရင် လယ်တီဆရာတော်ကြီးနဲ့ ခေတ်ပြိုင် မဟာဝိသုဒ္ဓါရုံဆရာတော်ကြီးကို ပြေးမြင်ပါတယ်။ ဥပဥက္ကဋ္ဌလို့ ခေါ်တဲ့ သာသနာပိုင်အောက်တဆင့်က ဆရာတော်တွေကို တွဲဖက်သာသနာပုိုင်လို့ ခေါ်ရိုးထုံးဖြစ်ပါတယ်။ ခုတော့ ဘီဘီစီလို ဌာနကြီးကတောင် အသစ်မြှောက်လိုက်တဲ့ ဆရာတော်သုံးပါးကို ဒုတိယသာသနာပိုင်လို့မှားယွင်းစွာ သုံးနေတာ ဆုံးရှုံးမှုတရပ်ပါပဲ။
January 29 at 6:38pm · ရွှေကျင်ဂိုဏ်းအစည်းအဝေး စတဲ့နေ့ကပဲ ဒီစတေးတပ်စ်ကို ကျနော် ရေးတင်ခဲ့ပါတယ်။
“(လက်ရှိသာသနာပိုင်ကို သိပ်မသိလှပေမဲ့) ရွှေကျင်ဂိုဏ်း သာသနာပုိုင် ဥက္ကဋ္ဌဆရာတော်ကြီးများဟာ ပထမရွှေကျင်ဆရာတော်ကြီးကစလို့ ညောင်ရွှေကန်ကြီးဆရာတော်ကြီးအထိ လဇ္ဖီပေသလ သိက္ခာကာမ ရတ္တညူ မဟာနာယကဆုိုတဲ့ ဘွဲ့ဂုဏ်ရည်တွေနဲ့ အင်မတန် ထိုက်တန်တော်မူကြတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ လက်ရှိသာသနာပိုင်ကြီး အနိစ္စဓမ္မတာအလျောက် ပျံတော်မူရင် ရွှေကျင်ဂိုဏ်းစောင့် သံဃာကြီးများဟာ အာချလန် ပါချလန်ကြီးကို ဥက္ကဋ္ဌ ဒုဥက္ကဋ္ဌနေရာ မပေးမိလောက်အောင် အမျှော်အမြင်ကြီးတော်မူကြပါစေလို့ပဲ ဆုတောင်းရပါတယ်။”
ကျနော် ဆုတောင်းရင် ပြည့်တယ်ခင်ဗျာ။ ခု အာချလန် ပါချလန်ကြီးက ဒုဥက္ကဋ္ဌတဲ့။ လွယ်လွယ်လေးပဲ ဝါဆိုဘုန်းကြီး ပျံတော်မူရင် ရွှေကျင်ဂိုဏ်းကြီးကို သိမ်းလိုက်မှာ။ ဂိုဏ်းသာသနာကတော့ အင်း။
This entry was posted on January 31, 2015 at 1:54 pm and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.
2 Responses to “သာသနာလမ်း ဖြောင့်ဖြောင့်လုိုက်မယ်။ ဘုရားအလိုကျနေမယ်ဆိုတဲ့ ရွှေကျင်ဂိုဏ်းရဲ့အနှစ်အသား ပျက် ? all that glitter like Thidagu may be NOT gold…”
Zaifo Dinn Says:	February 21, 2015 at 9:03 am | Reply Dear
Brother please stop.
drkokogyi Says:	February 21, 2015 at 1:59 pm | Reply I don’t sent my blog to anyone.
I got this kind of message few times.
May be you wrong CLICK the follow button while accidentally reading my blog.
Please just click back the UNFOLLOW button or just spam on the e-mail.
Sorry …I even do not know your e-mail.
TQ for complaining politely. I used to get angry rude scolding for those kind of problem